एसईई लगायत सबै परीक्षा अनिश्चित, केही घण्टामै फेरिएको बुँदा नम्बर १२ ! | EduKhabar
एसईई लगायत सबै परीक्षा अनिश्चित, केही घण्टामै फेरिएको बुँदा नम्बर १२ !
काठमाडौं - कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा (एसईई) सहित सिटिईभिटि र विश्वविद्यालय तहका सबै परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । चैत ६ गते देखि सञ्चालन हुन गईरहेको एसईई, हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा हुने गरी निर्धारण गरिएका सिटिईभिटि र विश्वविद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरु अर्को सुचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समितिको बेलुका फेरी बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । समितिको दिउँसो बसेको बैठकले एसईई परीक्षा सुरक्षित एवं व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक पछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयको बुँदा १२ मा उल्लेख उक्त विषयमा परिवर्तन गरिएको छ । माथिको तस्विरबाट उक्त कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
समितिको बैठक सकेर पार्टिको बैठकमा पुगेका संयोजक पोखरेललाई पार्टिले परीक्षा पनि स्थगित गर्न निर्देशन दिए पछि उनले मिडिया मार्फत् उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि उक्त कुरा मिडियाबाटै थाहा पाएका थिए ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीलाई थाहै नदिई मिडिया मार्फत् एसईई स्थगितको घोषणा
बैठक सकिएको तीन घण्टामा के थप आपत् आईपर्ने देखियो वा देखिईसक्यो भन्ने बारेमा भने कसैले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
यसै बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने बिहीबारको परीक्षा यथावत राखेको भन्दै सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछिका परीक्षाबारे बिहीबार नै सूचना प्रकाशन गर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।